यसकारण चढाइन्छ मन्दिरमा नरिवल र चढाउनु पर्ने यसरी हो - Sakaratmak Soch
यसकारण चढाइन्छ मन्दिरमा नरिवल र चढाउनु पर्ने यसरी हो
वैदिक शास्त्र तथा पुराण तथा महाकाव्यहरुमा मन्दिरमा नरिवल चढाउनुपर्ने विषयमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यो फल इन्डोनेशियामा पाइन्थ्यो अनि पहिलो शताब्दी पछिको समयमा उत्तरी एशियातिर भित्र्याइएको जनाइन्छ। नरिवललाइ धेरै जस्तो शुभकार्य गर्न प्रयोग गरिन्छ। तोरण झै घरको ढोकामा कुनै शुभकार्य पुर्व नरिवल फोडिन्छ। नरिवललाई उर्वरताको प्रतिक मानिन्छ। त्यसैले धार्मिक विश्वास अनुसार, यदि कोही स्त्रीलाइ सन्तानको इच्छा भएमा नरिवलको रुख रोपेमा सन्तान प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ ।
भगवानलाइ किन चढाइन्छ नरिवल ? : शुभकार्य गर्दा भगवानको मूर्ति अगाडी नरिवल चढाइन्छ। यसो गर्नुको कारण यस्तो छ– परापूर्वककालमा मानिसको बलिदान गरिन्थ्यो। पुजाआजा गर्दा कुनै महत्वपुर्ण कार्यको अगाडी मानिसलाइ नै चढाउने चलन थियो। पछि यो कार्यमा कुरा उठ्न थालेपछि मानिसको ठाँउमा नरिवलले काम चठाउन थालिएको विश्वास गरिन्छ । किंवदन्ती अनुसार नर वलीको ठाउँमा नरिवललाई प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।
सांकेतिक अर्थ: नरिवल फुटाउदा सांकेतिक रुपमा व्यक्तिको अहंकार पनि टुट्ने बुझिन्छ। अहंकारलाइ व्यक्तिगत अनि आध्यात्मिक विकासको लागि सबैभन्दा ठुलो कारक मानिन्छ। हिन्दु धर्मग्रन्थ अनुसार नरिवल फल नै ऋषि विश्वामित्रले बनाएका थिए। राजा सत्यवर्त मानिसकै रुपमा स्वर्गलोक जान चाहन्थे तर स्वर्गका देवताहरुले आउन नदिएको कारणले सहयोगार्थ विश्वामित्रले नरिवलको उत्पति गराएका थिए। सत्यवर्त सूर्यवंशका चर्चित अनि धर्मात्मा राजा थिए।सत्यवर्तको एउटै इच्छा थियो, आफ्नो शरिर समेत नै स्वर्गलोक हुने। भित्री फल बाहेक नरिवलको अन्य भागहरु पनि प्रयोगमा ल्याइन्छ। बाहिरको कडा भाग फर्निचरहरुमा विभिन्न कामको लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ। भित्री फल त्यतिकै खान तथा अन्य परिकारहरुमा मिसाएर खाइन्छ।
मन सफा अनि नियत राम्रो होस, मान्छेको अनुहार नराम्रो हुँदैमा केहि फरक पर्दैन – अनमोल भनाईहरु
बयान कसरी गरु आफ्नो दुख हरु सुन्ने त धेरै छन यहाँ तर महसुस गर्ने कोही छैन – मनछुने लाईनहरु
आफुले प्रेम गरेको व्यक्ति बिवाह गर्न योग्य छ कि छैन भनेर कसरि थाहा पाउने ? यस्ता छन् उपाय